Kedu ihe bụ Monel 400 Alloy (UNS No4400)? Ihe niile I Kwesịrị Ịmara-Industry News-Hunan Allianz Metal Products Co., Ltd.
Kedu ihe bụ Monel 400 Alloy (UNS No4400)? Ihe niile I Kwesịrị Ịma
Oge: 2020-06-05 HITS: 2
400 mejupụtara bụ ihe ngwọta siri ike nke nickel-ọla kọpa nwere otu usoro nke nwere ezigbo nguzogide n'ọtụtụ ebe na-emebi emebi n'ụdị okpomọkụ sitere na mwepu ruo 800ºF. Enwere ike ime ka alloy a sie ike naanị site na ịrụ ọrụ oyi kama ọgwụgwọ okpomọkụ. Okpomọkụ Curie nke alloy dị n'ime oke ọnọdụ okpomọkụ yana mgbanwe na kemịkalụ nke alloy na-emetụta ya. A na-atụ aro ka iji ya nke ọma na ngwa ndị chọrọ njirimara siri ike na-abụghị magnetik. Oke ọla kọpa na nickel dị na alloy 400 fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu nha dị na ore nke metal ahụ sitere. Alloy e bu ụzọ nweta patenti ihe karịrị otu narị afọ gara aga, ma ọ ka bụ otu n'ime alloy ndị na-eguzogide corrosion a na-ejikarị eme ihe n'ahịa.
Njirimara nke VDM®Alloy 400 bụ:
Nguzogide corrosion nke chloride kpatara
Ike magburu onwe ya ọbụlagodi na okpomọkụ ngwa ngwa
Tụnyere ihe ndị ọzọ dị elu alloy, dị mfe nhazi
Ekwenyere maka iji n'ime ụgbọ mmiri nrụgide sitere na -10 ruo 425 ° C (14 ruo 797 ° F) dịka tebụl ihe VdTÜV 263 na nke dị elu si dị.
Dabere na nkọwapụta ọkụ ọkụ ASME na ụgbọ mmiri nrụgide, oke okpomọkụ nwere ike iru 480°C (896°F).
A na-atụ aro ka a na-agbakọta alloy ahụ site na ịgbado ọkụ arc gas, ịgbado ọkụ igwe, ịgbado ọkụ igwe gas na ịgbado ọkụ n'ime mmiri.
Ekwesịrị iji usoro a na-achịkwa arụ ọrụ nke Alloy Monel 400.
Ọrụ na-ekpo ọkụ
Alloy a kwesịrị ịdị ọkụ na-arụ ọrụ site na ịhọrọ okpomọkụ kwesịrị ekwesị. Ụdị ọnọdụ okpomọkụ maka ịrụ ọrụ ọkụ bụ 648-1176°C (1200-2150°F).
Oyi na-arụ ọrụ
Enwere ike iji ihe ọkpụkpụ dị nro mee ihe maka nhazi oyi iji nweta nsonaazụ nhazi ka mma.
Enwere ike ikpuchi alloy MONEL 400 na okpomọkụ nke 926°C (1700°F).
Ụlọ ọrụ na ngwa:
A na-eji Alloy 400 eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ dị iche iche ma bara uru karịsịa na ụlọ ọrụ mmiri na ụlọ ọrụ nhazi kemịkalụ. Ngwa ndị a na-ahụkarị gụnyere nfuli na valvụ, oghere propeller, ihe nrụnye ụgbọ mmiri na ihe mgbakwunye, akụrụngwa elektrọn, isi iyi, akụrụngwa nhazi kemịkalụ, mmiri ọhụrụ na tankị brine, ụgbọ mmiri na-edozi arịa na ọkpọkọ, igwe ọkụ ọkụ na-enye mmiri ọkụ, na ihe ndị ọzọ na-enye ọkụ.
The elu tensile ike nickel/ọla kọpa alloy bụ nke ukwuu eguzogide corrosion ikuku, brine na dị iche iche acid na alkali ngwọta. Ejiri ya na injinia mmiri, kemịkalụ na akụrụngwa nhazi hydrocarbon, valvụ, nfuli na ndị na-agbanwe ọkụ.
Ronsco usoro n'ichepụta center bụ a keukwu n'elu ikpo okwu na nke ọma a kwadebere igwe, nke na-si Japan, German, Taiwan wdg The machining emmepe nwere multi-ọkọlọtọ, elu-nkenke na multi-ọrụ equipments dị ka ise ihu cnc gantry machining center, NC. Igwe eji eme ihe na-agwụ ike, igwe kwụ ọtọ / kwụ ọtọ, igwe na-egwe ọka kwụ ọtọ / kwụ ọtọ, igwe na-egwupụta oghere miri emi, igwe ọtụtụ igwe na igwe na-adọba ụgbọala, ebe igwe kwụ ọtọ, igwe igwe kwụ ọtọ / kwụ ọtọ, igwe na-egwe ọka NC, igwe na-egbutu Laser igwe, igwe mpịakọta. Anyị ịgbado ọkụ center nwere ike inye NGW, SAC, akpaka SAW, GMAW, TIG, SMAW, PAW, SW etc.We nwere ike na-enye usoro ọrụ dị ka ịcha, beveling, ekwe, Rolling, pịa-punching, ịgbado ọkụ, igwu ala na lathing wdg, nakwa. dị ka okokụre ngwaahịa na components maka arịa na tank.
Ntuziaka 9 maka nrụpụta welded nke nickel alloys Hastelloy C-276